onlineakhabar.com: सबैले भन्छन्, मुस्कुराउदै जिउनु सिक्नुपर्छ, अनि म पनि कोसिस गर्छु...
Nepali News, News, Powerful Nepal, Powerful Women, Viral News » सबैले भन्छन्, मुस्कुराउदै जिउनु सिक्नुपर्छ, अनि म पनि कोसिस गर्छु...
सबैले भन्छन्, मुस्कुराउदै जिउनु सिक्नुपर्छ, अनि म पनि कोसिस गर्छु...
नयाँ बर्ष मनाएर कन्चनपुरबाट काठमाडौंका लागि नाइट बस चढे म, करिब वैशाख ७/८ गते तिरको कुरो होला । कैलालीको अत्तरिया आइपुग्दा लगभग साँझ पर्न लागिसकेको थियो ।
२ युवती त्यहाँबाट पनि गाडी चढे । म बसेको सिट पनि आधा खाली थियो, मभन्दा पछाडि पनि एउटा केटामान्छे बसेको रहेछ ।
ती २ महिलाहरुले त्यो पुरुष साथिलाइ अगाडी बसिदिन आग्रह गर्दै त्यसमा आफूहरु २ जना बस्न चाहेको बताए । अब कैलालीबाट काठमाडौंसम्मको यात्रा लामै छ, सिटबिना कठिन हुन्छ यात्रा गर्न, चोर औलाले म बसेको छेउलाई देखाउदै ति युवकले सोधे, हजुरसँग कोहि छ ? यता बस्ने ।
टाउको हल्लाउदै कोहि नभएको मैले जानकारी गराए, त्यो मान्छे आएर सरासर सिटमा बस्यो ।
त्यहाँबाट करिब घोडाघोडी तालसम्म आउदा हामी आ – आफ्नै सुरमा थियौं, फेरी घोडाघोडीमा बस रोकियो, मेरो छेउमा बसेको मेरो अघोषित मित्र उठेर बाहिर गयो । यहिसम्म आउने मान्छे रैछ, अब सिटमा म एक्लै हुने भए मज्जाले सुत्न पाईने भयो, मनमनै यहि सोच्दै थिए, 'अलि पर सर्नुस त्' भन्दै उ फेरी आएछ ।
१ हातमा अलिकति अंगुर र अर्को हातमा २ वटा पेप्सी बोकेको थियो, म चुपचाप आफ्नो ठाउँमा सरे । अंगुर मनपर्छ ? उसले खान आग्रह गर्दै मतिर हात अघि बढायो, नाइँ, ठिक छ म नखाने, मैले भने ।
'खानुस् न पैसा माग्दिन क्यारे' उसले मुस्कुराउँदै फेरी व्यंग्यात्मक तरिकाले आग्रह गरेपछि २ दाना लिए । उ खादै थियो, फेरी बोल्यो, २ दाना अंगुर खाएर तपाई अघाइसक्नुभयो ?
म अंगुर खाएर कहिले अघाउदिन्, मैले खान थाले भने तपाईलाई पुग्दैन भनेर नखाएको, मैले थपे मलाई झ्याउ लाग्दै थियो उसको तरिका देखेर ।
लौ यो पेप्सी तपाईलाई, उसले फेरी टक्रयायो ।
किन खाने मैले तपाईले दिएको सबै चिज, तपाई कोहो ? केहो ? म ससंकित भनेको देखेर मेरो जिज्ञासालाई उसले सहर्ष स्वीकार्दै भन्यो, म अविनाश, कसैको विनाश नचाहने मान्छे, मलाई अन्यथा सोच्नुभयो भने त् यत्रो बाटो छ, म काठमाडौं जादैछु, मलाई लाग्छ सायद तपाई पनि त्यतै हो । अलि गफगाफ बोलचाल नगरी यत्रो लामो यात्रा झुर बनाउन मन छैन मलाई । यो अंगुर र यो पेप्सी किन्दा नै मैले तपाईकै लागि भनेर किनेको । खानुहुन्न भने म मेरो छोरीलाई लान्छु, नो प्रोब्लम !
हो यस्तो कुरा अर्काको छोरीलाई खुवाउनु भन्दा आफ्नै छोरीलाई खुवाउनुस् बाउ हुनुको भूमिका निर्वाह हुन्छ । मैले बोलेको यो कुराले सायद उसको मन छोएछ क्यारे । उ बोलेन त्यसपछि...।
गाडी अलि ढिलो हिडेकोले हामी कोहोलपुर आइपुग्दा रातिको १० बजिसकेको थियो, बसको कन्ट्याक्टर भाईले कराउदै थियो, 'ल है खाना खान झरौ, आधा घण्टामा बस हिड्छ छिटो गर्नुहोला सबैजनाले ।'
म पनि झरे ! एउटा साधा खाना लिएर खान थाले भोक पनि नलागेको कहाँ होर ? अपरिचित मान्छेले दिएको खानेकुरा खानुहुन्न भनेर बचपनमा बाउआमाले सिकाउनुभएको थियो त्यहि बाबाआमाको कुरो कण्ठ गरेकी म किन खान मान्थे र अविनाशको पेप्सी र अंगुर ।
ओहो ! एक्लै – एक्लै पो ? हातमा खानाको प्लेट र त्यहि छोरीलाई भनेर राखेको पेप्सी बोकेर त्यहि टेबुलमा आयो अविनाश । अह खाना खाने त् हो नी एक्लै होस् या सामूहिक के फरक पर्छ र ? मैले जवाफ दिए ।
त्यो त् हो म पनि यतै बसे है त् ? उ पल्लोपट्टि कुर्सीमा बसेर खान थाल्यो । खाँदाखाँदै फेरी बोल्यो ।
बियर खानुहुन्छ ?
ह्वाट ? तपाई खानुस न , म किन खाने ? अरु केहि खान नपाएको भए पो बियर खानु ?
उसले हास्दै थप्यो, थोरै हाँसो थोरै ठट्टा पनि जरुरी छ जिन्दगीमा, मस्ति बिना त मस्तिष्क पनि आधा अधुरो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अनि सुन्नुहोस् मैसाव रिक्विस्ट पठाएको छु है ? उ गाउले भाषामा बोल्यो ।
हस, तपाईको घर कहाँ हो ? काठमाडौंमा के गर्नुहुन्छ ? अब भने सोधे मैले । घर सर्लाही, काम गर्छु बैंकमा, त्यसकै सिलसिलामा महेन्द्रनगर आएको थिए । उसले मोबाइल चलाउदै भन्यो अनि तपाँर्इको नी ?
म पनि सानोतिनो पत्रकारिता गर्छु, मैले भने । उसले राम्रोसँग हेर्यो र सोध्यो हो र ? केमा काम गर्नुहुन्छ ? आईमिन रेडियो, टिभी, पत्रीका अनलाइन ?
रेडियो र पत्रीकाको अनुभव लिइयो, अहिले अनलाइनतिर छु । उसले मोबाइल नम्बर माग्यो, मैले भिजिटिङ कार्ड दिए । तत्काल मिसकल हानेर भन्यो अविनाश भनेर सेभ गर्नुहोला ।
को – को हुनुहुन्छ घरमा ? जिज्ञासा लाग्यो र सोधे
उसले बताउन चाहेन, कोहि छैन, भन्दै टार्यो । भन्न नमिल्ने भए ठिकै छ, भन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, मैले सोधिहाले, सरि, मलार्इ नरमाइले लाग्यो उसको चिन्तित र भावुक अनुहार देखेर ।
एउटा सम्बन्ध जोगाउन कति धेरै सम्बन्धहरू बलिदान गर्नुपर्छ । आफन्त,साथीभाई, परिवार अनि कहिलेकाहीँ कर्तव्य नै पनि छोड्नुपर्छ तैपनि जोगिँदैनन् सम्बन्धहरू। उ असह्य तरिकाले बोल्यो !
मैले भने हो, सम्बम्धहरु भनेका सिसाजस्तै हुन्छन् । सहि तरिकाले निभाउनु पर्छ, टुटेपछि त् टुट्यो, टुट्यो । जति नै पहिलेको स्थिति र आकार प्रकारमा ल्याउन खोजे पनि सकिदैन ।.. जिन्दगीका हरेक पलमा खुशी त कहा मिल्छ र दुखसँग पनि मित्तेरी लगाएर कहिलेकाहीँ जिउनुको वास्तविकता पनि अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ !
तपाईलाई त्यस्तो के पर्यो र ? अघि छोरीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कि जीवनसंगिनीसँग सम्बन्ध राम्रो छैन ?
मेरो प्रश्नको उत्तर दिन उसलाई अलि कठिन भएजस्तो लाग्दै थियो, तैपनि उ बोल्यो, सधैं शब्दले मात्रै भावना व्यक्त गर्न सकिदैन। त्यसैले त आँशु झर्छ नि । मेरो बुवा बितेको ३ महिनामै आमा अर्कै बुवासँग पोइल जानुभयो, बहिनी ६ बर्षको थिइ त्यतिबेला । उसको कुरा बिचैमा काटेर फेरी सोधे मैले, अनि बुबा बितेको कति बर्ष भयो ?
१३ बर्ष ! उसको आँखाभरि टिलपिल आशु देखियो उ भन्दै थियो, सबैले भन्छन्, मुस्कुराउदै जिउनु सिक्नुपर्छ..! अनि म कोसिस गर्छु... ल है चिया नास्ता खानुस १५ मिनेट गाडी रोक्छ, उता कन्ट्याक्टर भाई फेरी करायो.. घडी हेरेको बिहानको ४: १५ बजेको थियो, हामी बुटवल आइपुगेका रहेछौ । क्रमश:
Tags : Nepali News News Powerful Nepal Powerful Women Viral News